Bread & Toast အကြောင်း | Strong Source Holding Co., Ltd
Bread & Toast အကြောင်း
Strong Source Holdings ရဲ့ Business Unit တွေထဲမှာမှ F&B လုပ်ငန်းစု တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Bread & Toast ဆိုတဲ့ Bakery လေးအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Bread & Toast ကိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရေကျော်ဆိုင်ခွဲလေးကတော့ Bread & Toast ရဲ့ ပထမဆုံးဆိုင်ခွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bread & Toast ဆိုင်ခွဲလေးတွေဖြစ်တဲ့ Parami ဆိုင်ခွဲလေးကိုတော့ ( ၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ စမ်းချောင်းဆိုင်ခွဲလေးကိုတော့ ( ၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ မြောက်ဥက္ကလာဆိုင်ခွဲလေးကိုတော့ (၂၀၁၈ ) ခုနှစ်၊ မြောက်ဒဂုံဆိုင်ခွဲလေးကိုတော့ ( ၂၀၁၈) ခုနှစ်တွေမှာ အသီးသီးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Bread & Toast မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ မုန့်အမျိုးအစားနဲ့ သောက်စရာတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။ Sweet Dough လို့ခေါ်တဲ့ အဆာပြေစားနိုင်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ကိတ်မုန့်တွေ၊ ကွတ်ကီးကြိုက်သူတွေအတွက် Cookies & Pastry ဆိုပြီးရှိသလို မုန့်မျိုးစုံနဲ့တွဲဖက်စားသောက်နိုင်တဲ့ Smoothies & Fresh Juice တွေလည်းရနိုင်သလို ကော်ဖီအမျိုးမျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Toast & Smoothies
Coffee & Cake Design
Chicken Circle Bread Design
Cheese Ctream Design
Bread & Toast မှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ စားစရာမုန့်လေးတွေနဲ့ Coffee အမျိုးအစားလေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Sweet Dought ထဲမှာဆို Croissant လေးတွေ၊ Vitamin C Bread, Chicken Floss နဲ့ Pork Floss လေးတွေ၊ Slice Cake ထဲမှာဆို American Cheese Cake, Chocolate Brownie Cake, Vanilla Fruit Cake လေးတွေ၊ Dry Cake လေးထဲမှာဆို Dry Butter Cake, Thousand Layer Cake လေးတွေကို လူကြိုက်များကြပြီး Americano, Cappucino, B&T Tea တွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်သလို Smoothies လေးတွေကလည်း Bread & Toast ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို မကြာခဏခံရပါတယ်။
Bread & Toast Bakery လေးကို လာရောက်ရင်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနဲ့ သာယာတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Bread & Toast ဆိုင်ခွဲလေးတွေရဲ့ လိပ်စာလေးတွေနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် အသီးသီးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Bread & Toast (North Okkalar)
📍No.286, Ground Floor (B), Shwe Gyoe Phyu Condo, Khaymar Thi Road, (D)Ward, Near By May Dharwi Junction, North Okkalapa Township
☎ (+95)9 263334060
Bread & Toast (San chaung)
📍No.195 Between Shwe Laung Street & Kaung Kone Street, Baho Road, Sanchaung Township, Yangon.
☎ (+95)9 263334050
Bread & Toast (Hlaing)
📍No.34, Parami Street, 10 Ward, Hlaing Township, Yangon.
☎ (+95)9 263334040
Bread & Toast (Tamwe)
📍No.3, Ground Floor (B), Kyar Kwut Thit St, Tamwe Township , Yangon.
☎ (+95)9 252221166
Bread & Toast (North Dagon)
📍No.421, Pinlon Road, 32 Quarter, North Dagon Township, Yangon
☎ (+95)9 263334020
💥 SS Food Delivery, Food Panda တို့ကိုအသုံးပြုပြီးလည်း ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြင့် မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်… 🚴‍♂️